Ianaro ny fomba fanamboarana ny router amin'ny 192.168.1.1 | Vaovao momba ny gadget
Ianao no mahalala amboary ny router amin'ny 192.168.1.1? Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny router dia nanjary fitaovana lehibe amin'ny trano rehetra rehefa mila manitatra ny sehatry ny fandrakofana momba ny fifandraisana Internet. Na dia marina aza fa ny ankamaroan'ny modem napetraky ny mpandraharaha dia miasa ho toy ny router ihany koa, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny elanelan'ny Wi-Fi dia mamela zavatra betsaka irina., ankoatry ny fanolorana safidy vitsivitsy ho anay.
Amin'ireto tranga ireto dia voatery mividy router izahay, raha azo atao fa bandy roa ianao handray soa amin'ny tombony haingam-pandeha atolotry ny tarika 5 GHz, tarika iray na dia marina aza ny sakany dia tsy midadasika toa ny 2,4 GHz , ny hafainganana omeny antsika dia avo kokoa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba azontsika atao ny mampiditra ny fikirakirana ny router.
Ny olana voalohany hitantsika rehefa miditra amin'ny router izahay dia ny mpanamboatra. Ny mpanamboatra tsirairay dia misafidy ny manampy adiresy IP isan-karazany hahafahanao miditra ao amin'ny fikirakirana ny router ary afaka manitsy ireo masontsivana ilaina mifanaraka amin'ny filantsika, na amin'ny alàlan'ny fampandehanana na famonoana tarika, fanovana ny anarana SSID, ahafahana mampiasa IP static, manokatra seranana ...
1 Inona no atao hoe router
2 Ahoana ny fidirana amin'ny router
3 Ahoana ny fomba handefasana router
3.1 Ovao ny SSID / Wi-Fi tambajotra anarana sy teny miafina
3.2 Sivano amin'ny alàlan'ny MAC ireo fitaovana azo ampifandraisina
3.3 Fifehezana ny ray aman-dreny
3.4 Ovao ny fantson'ny fambara anay
3.5 Seranana misokatra
3.6 Ampandehano na esory ny kofehy
3.7 Ovao ny solonanarana sy tenimiafin'ny router
3.8 Zahao ny fiasan'ny router
Inona no atao hoe router
Raha tsorina, ny router dia a router, que dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fivezivezena ny modem anay, modem izay manana IP, static na dynamique, izay ahafantarana antsika amin'ny Internet. Miankina amin'ny isan'ny fiasa atolotry ny router antsika, dia hisy vidiny ambony kokoa, ka rehefa mividy router ianao dia mila mandray anton-javatra samihafa, toy ny hafainganam-pandeha farany ambony, tarika, safidy fikarakarana vahiny ...
Ahoana ny fidirana amin'ny router
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, raha te hiditra amin'ny router, ny IP hampiasana dia 192.168.1.1, fa ny mpanamboatra sasany nisafidy ny hampiasa 192.168.0.1, antony iray izay azon'izy ireo ihany. Fa ankoatr'izay dia tsy maintsy fantarintsika amin'ny fotoana rehetra koa ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafina mitovy amin'izany, satria raha tsy izany, na dia fantatsika aza ny adiresy IP an'ny router, dia tsy ho afaka hiditra amin'ny fikirakirana isika ary hanova ny masontsivana ilaina. Ity fampahalalana ity matetika hita eo amin'ny farany ambany ny fitaovana, hany ka eo an-tanana hatrany.
Raha tsy eo izy dia tsy maintsy mandeha any amin'ny bokin'ny fametrahana fitaovana isika. Raha very io, na atsipintsika satria heverintsika fa tsy ilaina ny fampahalalana ao amin'ilay torolàlana, dia afaka mankany amin'ny Google isika ary mitady ny teny miafina sy ny anaran'ny mpampiasa ny marika router ananantsika. Izany fampahalalana izany dia mitovy amin'ny fitaovana marika rehetra ary tsy misy ifandraisany na oviana na oviana amin'ny lakilen'ny WIFI ampiasainay.
Tadidio fa raha misy olona te hiditra amin'ny router, tsy maintsy miditra amin'ny Internet aloha ianao, dingana iray somary sarotra raha tsy mampiasa ny teny miafina mahazatra an'ny style 123456789, ny teny miafina, ny teny miafina, ny qwertyui ... Raha dinihina ity fampahalalana ity dia miharihary fa ny fampahalalana miditra amin'ny router, na inona na inona marika, dia misy amin'ny Internet. .
Manaraka izany dia avelako lisitra iray miaraka amin'ireo adiresy IP hahafahanao miditra amin'ireo router an'ny mpanamboatra lehibe.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga ny solonanarana sy ny teny miafina dia "admin", fa amin'ny sasany, ny anarana dia "faka" ary ny teny miafina dia "admin" na "1234" na ny mifamadika amin'izany. Raha tsy izy roa ireo dia tsy maintsy jerenao ny faran'ny fitaovana, ny boky fampianarana na ny Internet.
Ahoana ny fomba handefasana router
Ovao ny SSID / Wi-Fi tambajotra anarana sy teny miafina
Mampiasa matetika ny mpandraharaha anarana mahazatra rehefa manome anarana ny famantarana wifi amin'ireo fitaovana izay mametraka antsika, anarana izay mitovy be indraindray amin'ny zavatra hitantsika eo amin'ny manodidina antsika ary matetika dia sarotra tadidy izany. Misaotra ny router, na dia afaka manao azy mivantana amin'ny modem aza isika, afaka mampiasa anarana hafa ho an'ny tamba-jotra Wi-Fi vaovao izay hamboarintsika miaraka amin'ny router. Ho fanampin'izany, torohevitra ny hanovana azy io mba tsy hanana fotoana hampiasa diksionera ny naman'ny hafa rehefa fantany ny SSID an'ny router izay napetraky ny mpandraharaha ho antsika.
Sivano amin'ny alàlan'ny MAC ireo fitaovana azo ampifandraisina
Ny fanivanana MAC dia ampiasaina amin'ny orinasa, ka ny fitaovana izay nahazo alalana teo aloha ihany no azo ampifandraisina amin'ny tamba-jotra, ka tsy ampy ny mahafantatra ny tamba-jotra, ny mpampiasa ary ny teny miafina. Ny fanivanana MAC dia ahafahantsika manampy ny adiresy MAC an'ny fitaovantsika mba hahafahan'ny router ny fidirana ao aminy. Ny MAC an'ny fitaovana dia toy ny takelaka misy ny tsirairay amin'ireo fitaovana. Ity MAC ity tsy mamerina ary tsy manam-paharoa amin'ny fitaovana tsirairay.
Noho io safidy io dia azontsika atao ny mametraka mandritra ny ora izay ahafahan'ny zanatsika mifandray amin'ny Internet amin'ny fitaovana ampiasainy matetika. Afaka manao izany koa isika apetraho izay pejin-tranonkala azonao vangiana tsy mila eo ambany fanaraha-masontsika amin'ny fotoana rehetra.
Ovao ny fantson'ny fambara anay
Ny tarika ampiasain'ny mpitily io no lalana ampiasainao handefasana famantarana. Raha tena feno olona ny tarika iray, satria ny ankamaroan'ny signal Wi-Fi eo amin'ny tontolontsika dia mampiasa azy, fomba iray hanatsarana ny hafainganana dia ny fanovana ny tarika ho an'ny iray izay vitsy ny fifamoivoizana eo amin'ny manodidina anay. Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ahafahantsika mahita ity fampahalalana ity dia Biraon'ny InSSIDer ho an'ny Windows, o Analyzer Wifi, azo alaina maimaimpoana ao amin'ny Windows Store. Azontsika atao koa ny mampiasa ny rindranasa misy amin'ny finday. toy ny Wifi Analyzer na Network Analyzer.
Ny sasany amin'ireo rindranasa napetraka tao amin'ny solosainay dia mampiasa seranan-tsambo izay nakatona tsy hitranga, hialana amin'ny fanafihana ataon'ny naman'ny hafa. Raha te hankafy ny safidy rehetra atolotry ny fampiharana isika dia tsy maintsy mankany amin'ny router ary sokafy ny seranana izay lazainy amintsika, ka amin'izany fomba izany dia samy manana ny fahazoana miditra amin'ny Internet ny fampiharana satria raha tsy izany dia tsy ho ampy ny fandidiana na tsy mivantana.
Amin'ireo seranan-tsambo 65.535 misy dia 1 ka hatramin'ny 1023 no fantatra seranana ary ampiasain'ny rafitra indrindra hifandraisana amin'ireo rindranasa hafa na amin'ny Internet. Ny seranan-tsambo 1024 hatramin'ny 49.153 dia antsoina hoe seranana voasoratra anarana miaraka amina hetsika manokana. Manomboka amin'ny 49.154 ka hatramin'ny 65.535 dia miresaka seranan-tsambo mahery vaika izahay hampiasaina manokana, noho izany tsy manana tanjona voalaza izy ireo.
Ampandehano na esory ny kofehy
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny router, farafaharatsiny ireo avo lenta, manolotra karazana tarika roa ho antsika: 2,4 GHz, azo alaina amin'ny router rehetra izay manome antsika elanelam-potoana bebe kokoa, ary ny tarika 5 GHz, tarika izay miavaka amin'ny alàlan'ny fanolorana haingam-pifandraisana avo kokoa noho izay hita ao amin'ny tarika 2,4 GHz, saingy kely kokoa ny faritra. Avy amin'ny fikirakirana ny router, azontsika atao ny mampihetsika sy mamono ny fampiasana tiana hatao amin'ny tarika, ary koa mampiasa anarana hafa hahafahana mamantatra azy ireo amin'ny fomba tsotra kokoa.
Ovao ny solonanarana sy tenimiafin'ny router
Tsy mety mihitsy ny fanovana an'ity fampahalalana ity raha tsy hoe mila miditra amin'ny router isan'andro isika, satria rehefa mandeha ny fotoana, dia hadinontsika ny solonanarana sy ny tenimiafintsika raha tsy nosoratantsika eo ambanin'ny fitaovana fotsiny io. Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, mba hahafahan'ny olona miditra amin'ny router anay, aloha tsy maintsy manana ny fidirana amin'ny Internet, zavatra tsy azo inoana araka ny nolazaiko tao amin'ilay fizarana teo aloha.
Zahao ny fiasan'ny router
Raha toa ka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fifandraisantsika amin'ny Internet, voalohany indrindra dia tokony hizahantsika raha samy marina na ny fifandraisana amin'ny modemintsika na ny an'ny router. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mankany amin'ny vakizoro Status isika, izay haseho ao amin'ny fizarana Log, raha toa ka ny router manana olana amin'ny fifandraisana Internet ianao nalefan'ny modem.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Hamboarina ny router
Ryzen 5 2500U puce dia manome fahombiazana avo kokoa noho ny processeur Intel